KUFSIINTA UKUNTA DUURJOOGTA GURIGA: MIIS LA LEH NIDAAMYADA HEERKULKA SI AY U ILAALIYAAN SHAQOOYINKA CAADIGA AH, TAXANAHA TALLAABOOYINKA - BEERAHA DIGAAGA
Talada khabiirada xirfadlayaasha ah ee ku saabsan qandhada ukunta duurjoogta guriga
Kordhinta ukumaha dhiiqada waa ganacsi faa'iido leh. Thanks to indubation caag ah, waxaa suurtogal ah in la helo caafimaad iyo dhamaystiran farcankiisa.
Laakiin tani waxay u hoggaansamaysaa dhammaan xeerarka iyo talooyinka, sababtoo ah kuleelku maahan habka fudud. Waxay ubaahantahay dareen dheeraad ah iyo masuuliyad weyn. Akhri qodobkan.
Maxay tahay nidaamkan?
Kufsi waa geedi socod kakan oo u baahan fulinta shuruudaha iyo shuruudaha qaarkood. Tani waa wakhti ay lagama maarmaan u tahay wareegga buuxa ee horumarinta noolaha.. Ujeeddooyinkan, qalab gaar ah ayaa loo adeegsadaa xaaladaha ugu wanaagsan ee loo abuuro bisaylkiisa uurjiifka. Tani waxay kuu ogolaaneysaa inaad dardar geliso geedi socodka guurka, iyo sidoo kale yaraynta hormarka.
DAREEN: Digaagga laga helo kuleylka waa kuwo caafimaad qaba, xooggan, waxay u dulqaadanayaan toddobaadka ugu horreeya ee nolosha oo si dhakhso ah u koraan.
Qaabdhismeedka dhismaha iyo udoodida
Ukunta duufaanku wuxuu ka kooban yahay biyo, nafaqooyin iyo qaybaha macdanta.. Waxay ka kooban tahay dhammaan waxyaabaha muhiimka u ah embriyaha xilliga kuleylka iyo xilliga xaddidaadda ka dib.
Inkasta oo ukumaha lafdhabarta ee noocyada kala duwan ay u muuqdaan kuwo muuqda, waxay yeelan karaan kala duwanaansho muuqaal ah oo ku saabsan baaxada iyo cabbirka. Maydhayaashooda waa in lagu daboolaa qaybo. Waa caqabad dabiici ah oo ka soo horjeeda microbes. Intaa waxaa dheer, hawl isku mid ah waxaa sameeya walxaha borotiinka.
Ukumaha duufaanku wuxuu leeyahay qaabka loo yaqaan 'ellipse'. Muuqaal ahaan u go'aamiyaan meesha ay ku adag tahay in la soo koobo. Shelladu waxay u egyihiin sida lakabka oo waxay leeyihiin nabaro. Waxay noqon karaan kuwo yaryar oo aan ku habooneyn noocyada kala duwan ee shimbiraha.
Xulashada iyo kaydinta
Qodobka wacyigalinta waa in la ururiyaa sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah kadib markii la gooyey. Kaydinta ukunta waxay dhacdaa heerkul ah 16-18 digrii. Waqtiga kaydinta maaha wax ka badan 7 maalmood. Maalin kasta waa qiimo beddeleysa.
Ka hor inta aan la gelinin waxyaabaha ku jira masraxa, waxaa lagama maarmaan ah in jeermiska laga saaro oo laga saaro wasaqda jirta. Haddii aad qolofta ku xoqdo burush, waxay kordhineysaa dhimashada dhimashada embriyaha. Xaqiiqdu waxay tahay in inta lagu guda jiro maareynta noocaas oo kale ah qolofka ay waxyeello gaari karto, indhashiirkuna waa la burburiyay, sarrifka hawadu wuu jabay.
Virkon-S waxaa loo isticmaalaa in laga saaro wasakhda ukunta. 1 litir oo biyo ah, qaado 2-3 g oo ah walaxda. Biyaha dhar dhaqashada waa inay ahaadaan kuwo diiran. Haddii aad isticmaasho biyo qabow, waxay u horseedi doontaa in la yareeyo hawada hawada ee qolalka qolofka, taas oo keeni doonta in la geliyo microbes iyo bakteeriyada waxyeesha ukunta.
Marka la dhaqo ukunta, waa in la raaco talooyinka soo socda.:
Shaqooyinka nadiifinta, burush jilicsan ayaa loo baahan yahay.
Nadiifinta nadiifinta waa inay ahaataa 5 digrii oo kuleyl ah marka loo eego ukunta
Ka dib markii aad maydho, qalaji walaxa.
Marxaladaha horumarinta embriyaha
Marka qallajiyadu ay ka soo baxdo maskaxda, waxaa jira dhowr marxaladood oo horumar ah:
Maalinta 7aad ee ukunta bacriminta waxaa jira hooskii allantois. Waxay kuxiran tahay 20% dusha qolofka.
Maalintii 14aad hooska waxaa si fudud loo kala saaraa. Waxay kordhisaa, qaadashada dusha sare ee ukunta ilaa ½. Dheeraad ah ayaa hoos u dhacaya.
Maalintii 24aad 1/6 ee ukunta waxaa ku jiraa qolka hawada, iyo ½ - embriyaha.
Maalintii 33aad Embriyo waxay ku jirtaa 2/3 mugga.
Laga bilaabo maalinta 35aad Ilaa waxba waxba laguma kala duwanaan karo, sababtoo ah ukunta ayaa si buuxda u buuxisa embriyaha.
Tilmaamaha iyo miisaska qaababka
TALO: Wanaajinta caanaha, waxaa lagama maarmaan ah in la isticmaalo iskubarro gaar ah oo loogu talagalay ukunta dhufsiyada waaweyn.
Qalabka casriga ah waxaa lagu qalabeeyaa shaqooyin kala duwan, taas oo ay suurtogal tahay in la xakameeyo geeddi-socodka dhan ee habka tooska ah. Tilmaamaha heerkulku waa inay ahaadaan qiyaas ahaan 36-36.4 digrii.
Moodooyinka casriga ah waxay awood u leeyihiin inay si madaxbanaan u kormeeraan heerkulka, qoyaanka, sarrifka hawada, iyo sidoo kale waxay ku qalabaysan yihiin ukunta tooska ah ee ukunta. Wakhtiga uumiga ee ukunta duurjoogta waa 42-43 maalmood.. Ka hor inta aan la qabin chicks (41-42 maalmood), ukumaha waa in loo wareejiyo hatcher gaar ah.
Jaantuska 1 - Xaaladaha heerkulka iyo qoyaanka ee ukunta ukunta guriga
Maalinta dhalinta Heerkulka, 0C Qoyaan,% Mowjada cuntada Waxay isku rogtaa baayacmushtarka, waqtiyada
1-14 36,3-36,5 20-25 Qodobbalka ama cirifka 24
15-21 36,3-36,5 20-25 toosan 24
22-31 36,3-36,5 20-25 toosan 3-4
32-38 35,8-36,2 20-25 toosan -
39-40 35,8-36,2 40-45 Qodobbalka ama cirifka -
41-43 35,8-36,2 60-70 toosan -
Haddii aad rabto inaad gacan-qabsi ku sameysid gacmahaaga, waxaad akhrin kartaa maqaalkan.
Ka dib marka la soo xulo, ukunta dhirta ayaa la dhaqaa, jeermiska oo lagu kaydiyaa heerkul ah 15-18 digrii. Waa lagama maarmaan in la badiyo 2 jeer maalintii. Gaadiidka ka dib, qalabka waxaa lagu fuigated with formaldehyde. Isku-shubinta ukunta waxaa lagu qaadaa qamarada oo leh awood 1,690 ukun..
Maalinta 10aad ee kaboojinta, ukumaha waa in laga saaraa kuleylaha oo miisaamaya si loo go'aamiyo yareynta. Haddii ukunta lumiyo in ka yar 12 ama in ka badan 15%, markaa waxaa lagu meeleeyaa qollado kulul oo kala duwan oo qoyaan kala duwan leh. Kormeerka la midka ah waxaa la sameeyaa 2-dii toddobaadba mar. Sidaa darteed, dhamaadka muddada kulaylka, waxaa suurtagal ah in la helo tirada ugu badan ee ku habboon ee chicks taranta.
Helitaanka waqtiga saxda ah
Waqtiga ugu haboon ee loo dhigayo ukumaha waa habeenkii 18.00. Wixii soo saar si ay u dhacaan si wanaagsan, waxaa lagama maarmaan ah in la xalliyo qalabka loo isticmaalo by size. Xaqiiqdu waxay tahay in chicks ugu horeeya ee ukunta yar yar yihiin, ka dibna kaliya ka weyn kuwa. Ugu horreyn, samee buugaag wax lagu qoro, 4 saacadood ka dib - dhexdhexaad ah iyo 4 saacadood kadib - yar.
Si loo xakameeyo horumarinta embriyaha, waxaa loo isticmaalaa qoorta.. Xaqiiqdu waxay tahay in qolofta duurjoogta ah ay aad u qoto dheer tahay, sidaa daraadeed in geeddi-socodka wax lagu baaro waxaad arki kartaa kaliya hooska dhicin-lugaha uur-ku-jirka ama embriyaha.
Ovoskop - tuubadaan, dhererkoodu waa 1 m iyo dhexroor u dhigma xajmiga ukunta. Saldhigga hore waxaa jira laydh awoodiisu tahay 100 watts. Dhamaadka soo horjeeda waa giraan caag ah oo ka ilaaliya qolofta waxyeello. Ka dib markaad xiriir la leedahay ukumaha, waa in lagu nadiifiyaa isbuunyo qoyan oo leh qashinka jeermiska.
MUHIIM: Waa ku filan inaad sameyso 2 aragtiyood oo ku saabsan caawinta qafiska - maalinta 13aad iyo 20aad. Intaa waxaa dheer, waxaa suurtagal ah in loo sameeyo ovoskopirovaniya toddobaad kasta, ilaa 39 maalmood.
Khaladaadka ugu caansan
Inta badan dhimashada embriyaha waxay ku dhacdaa sababahan soo socda.:
Xanuunada faafa. Haddii uu jiro fungal ama bakteeriyada, ka dibna borotiinka wuxuu bilaabmaa daruur, ur urka ayaa dhacaya. Noocyada caanaha ee muuqda, kuwaas oo ah unugyo dhintay.
Cudurada la xidho. Tani waa inay ka mid tahay hoos-u-dhac la'aanta gogosha, kicinta labada embriyo, horumarinta xubnihii xubnaha.
Dumarka uur-jiifka ah. Lagu arkay naas-nuujinta naas-nuujinta waalidka. Embriyosku waa nafaqo iyo nafaqo liidata. Beerku waa mid qaro weyn, oo macquul ah. Chicks latched ayaa curyaan.
Ukunta qallalan. Horumarinta iyo kobaca embriyaha waxaa laga hortagaa bilowga horudhacidda, waxay kordhisaa waqtiga hirgelinta chicks. Haddii qallal-celin dhaco, chicks badan, sii noolaadaan nool, wali dhinta.
Qoyaan la'aan. Ukuntu waxay bilaabaan in ay lumiyaan miisaanka, kordhinta qiyaasta qolalka hawada. Chicks ayaa ku dhalatay xilli hore. Qolku waa mid jilicsan oo qalalan. Waxaa jira heer dhimasho sarraysa.
Qoyaan xad dhaaf ah. Haddii qoyaanku korodho, markaa borotiinka waxaa ku daboolan allantois. Inta lagu guda jiro ovoscopy maalmaha ugu dambeeya ee ukunta, ukumo badan ayaa xuduudaha qolka hawadu xitaa, sidoo kale xuubaha germiska waxaa jira dareeraha. Qayb ka mid ah da 'yarta ayaa la dilay sababtoo ah qallajinta maqaarka iyo dhareerka qolofka goobta goobta prokleva.
Is-beddelka gaasta. Marxaladda hore ee maskaxda, tirada sii kordhaysa ee deformity ayaa dhacaya. Qeybta labaad ee maskaxda, booska embriyaha waa isbeddelaa - iyada oo madaxiisu ku toosan yahay dhamaadka ugxanta ee ukunta.
Talaabooyinka ugu horeeya ka dib marka la tirtiro
Tolko in ay u muuqdaan in chicks waa in si deg deg ah ku rid baqteer ah. Tani waa caleemo leh boorso, kaas oo lagu qalabeeyay sheyga birta iyo dabka kuleylka. Halkaas ku hay 2-3 saacadood si ay dhirta u qalajiso. Si aad u miisaanto qashin-qub kasta si loo xakameeyo horumarinteeda sii socota. Nadiifi xarigga xundhurta iyo qabashada dhacdooyinka noocaas ah 2-3 maalmood. Miisaanka shimbirta dhoobada cusub waa 500-900 g.
Waxaad ka akhrisan kartaa maqaalkan soo socda ee ku saabsan geedi socodka ukunta:
Waa maxay isugeynta ukunta ukunta?
Wareegga ukumaha turkey.
Qaababka xayawaanka ee ukunta foosto.
Waxyaabaha lagu xakameynayo ukunta digaaga.
Xeerarka lagu xakameynayo ukunta jilicsan.
Tilmaan ku saabsan isugeynta ukunta goose.
Qaababka uumiinka ukumaha ducada.
Xeerarka uumiga ah ee ukunta quailka.
Nidaamka ah in lagu kululeeyo ukunta digaagga.
Wareegga ukunta duurjoogta waa qaabsocod caan ah oo lagu fulin karo xaaladaha guriga iyo beeraha. Xaqiiqdii, shaqadani maahan mid aad u adag, inkastoo aad u muhiim ah. Beeraleydu waa in ay si dhow ula socdaan dhammaan xuduudaha iyo abuuraan xaaladaha lagama maarmaanka u ah horumarinta guulaha embriyaha iyo soo ifbaxaya cidhiidhin caafimaad leh.